Taona enina taorian’ilay famoretana nahafaty olona natao an’ilay fitokonan’ny mpiasa amin) orinasa mpanao akanjo tao Kambodza, tsy antenaina intsony ny fitsaràna hoy ireo fianakaviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2020 2:04 GMT
Mpiasa milanja mpanao hetsipanoherana naratra taorian'ny fifandonana tamin'ny tafika mitampiadiana teo amin'ny Arabe Veng Sreng ao Phnom Penh, ny 3 Janoary 2014. (Sary sy maribolana an'i Panha Chhorpoan/VOD)
Ity lahatsoratr'i Saut Sok Prathna dia avy ao amin'ny VOD News, tranonkalambaovao tsy mainkina iray ao Kambodza, ary naverin'ny Global Voices navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara vontoaty. Nadika avy amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany tao amin'ny VOD Khmer
Ny 3 Janoary 2014, an'arivony maro ireo mpiasa taminà orinasa mpanao akanjo no nidina an-dalambe tao Phnom Penh mba hanao fihetsiketsehana hitakiana karama ambonimbony kokoa —satria miasa mafy mandritra ny herinandro maro ry zareo. Rehefa nifarana ny andro, efatra tamin'izy ireo no namoy ny ainy. Ary iray no mbola tsy hita.
Notsenain'ny famoretana nahery setra ireo mpiasa teo anoloan'ny Canadia Industrial Park manamorona ny Arabe Veng Sreng, herisetra nataon'ny tafika manokana izay nitifitra bala nankany amin'ireo olona marobe tamin'io 3 Janoary 2014 io.
Raha nilaza tamin'ireo mpanatrika momba ny hetsika fahatsiarovana tsingerina iray, tora-tomany i Chheav Phanith, vadin'ilay niharam-boina Sam Ravy :
Isanandro aho anontanian'ny zanako vavy ‘Neny, fa nahoana kay izahay no tsy manana Dada? Neny, maninona aho no tsy manana ray toy ny hafa rehetra’
Tao amin'ny Foiben'ny Farimbon-tSendika sy Zon'Olombelona (Central), ny Zoma (3 Janoary 2020) i Phanith dia niantso ny governemanta handray andraikitra.
Tiako ny mangataka amin'ny governemanta mba hikaroka vahaolana, azafady, ho an'ireo fianakaviana rehetra nanana ny maty, hikatsaka ny rariny ho azy ireo.
Saingy toa tsy hahita izay rariny hoy ny nolazain'i Vorn Pov, filohan'ny fikambanana tsy miankina momba ny demaokrasia sy ny toekarena tsy anaty rafitra, izay voadaroka nandritra ilay famoretana, tamin'ny Alakamisy (2 Janoary 2020).
Hatreto aloha, toa tsy mbola manangasanga eny amin'ny faravodilanitra raha izay rariny izany, na toy ny mitady fanjaitra ao anaty fanambanin'ny ranomasina. Tsy mbola nahita izay mangirana momba ny rariny ho anay izahay.
Raha ny zava-nitranga tamin'ny Zoma, nambaran'i Pov fa hilamina ny firenena raha toa ka hita sy tontosa ny rariny ara-tsôsialy.
Rehefa misy ny filaminan'ny tena sy ny fanahy vao misy ny fandriampahalemana, ary tsy mbola milamin-tsaina ireo izay sasany taminay nizaka ny tsy rariny. Araka izany, heveriko fa tsy misy fandriampahalemana raha mbola tsy misy ny rariny ara-tsôsialy.
Mampiàko fihetsehampo tsy misy valaka amin'izany i Khim Soeun, rain'i Khim Sophat avy ao amin'ny faritanin'i Svay Rieng, izay tsy hita nandritra ilay famoretana, tamin'ny fitenenana hoe tsy naharesy lahatra azy ny hanantena ny governemanta hikatsaka ny rariny ho an'ireo fianakaviana. “[Izaho] te-hanao antso amin'ireo fikambanana erantany rehetra mba hitaky ny rariny ho an'ny fianakaviako.”
Saingy, ny 2 Janoary 2020, nambaran'i Chin Malin, mpitondratenin'ny Minisitry ny Fitsaràna fa tsy maintsy nataon'ny governemanta izay nisorohana fitroarana nandritra ireo hetsipanoherana, lazainy fa notarihan'ny antoko iray. Hoy izy tamin'ny VOD tao amin'ny WhatsApp:
Raha toa io vondrona [mpiasa] io tena naratra tokoa na nisy tsy hita, dia andraikitr'ilay vondrona izany na an'ilay antoko politika izay nikarakara ilay fitroarana sy nitarika azy ireo hanao hetsipanoherana mahery setra ho entina manongana ny governemanta.
Saingy i Sam Sary, rahalahin'i Pheng Kosal izay maty voatifitra, nilaza fa andraikitry ny governemanta izany satria tsy nisy nifandraisany tamin'ny pôlitika ilay hetsipanoherana ary fitakiana fotsiny ny hampitomboana ny karamany ho $160 isambolana no nataon'ireo mpiasa.
Ny antoko mpanohitra Cambodia National Rescue dia naneho ny firaisany hina amin'ireo mpiasa ary ilay hetsipanoherana dia nfanandrify indrindra tamin'ireo fanehoankery nanoherana ny fifidianana natao tamin'ny 2013, izay nolazain'ny mpanohitra fa feno hosoka.
Soeng Senkaruna, mpitondratenin'ny Adhoc, vondrona Kambodziana mpiaro ny zon'olombelona, nilaza fa ireo izay nanome baiko ny tafika hanao famoretana an-kerisetra tamin'ireo mpiasa no tomponandraikitra.
Vokatr'izany, nisisika ireo fikambanana sivily mba hametrahana tarika hanao fikarohana sy fanadihadiana tsy mainkina … izay tsy ho avy ao anatin'ny governemanta. Hatreto, tsy nahita izahay na hetsika iray aza natao mba hahitàna izay mpanatanteraka, nitifitra sy namono ireo mpiasa.
Araka ny antontanisan'ny ONG Licadho, mpiaro ny zon'olombelona, olona 38 no naratra nandritra ireo hetsipanoherana, voan'ny bala ny ankamaroany, ary 23 ireo mpitarika sendika nosamborina sy naiditra am-ponja nandritra ny dimy volana. Enina ireo mpitarika sendikà voasazy roa taona an-tranomazina tamin'ny Desambra 2018, na dia nahantona daholo aza ny sazin-dry zareo.